ပင်းတယ-ကလော-တောင်ကြီး-ထမ့်စန်း-ကက္ကူ-အင်းလေး ၄ည-၅ရက် ခရီးစဉ် - MyanmarAds
ပင်းတယ-ကလော-တောင်ကြီး-ထမ့်စန်း-ကက္ကူ-အင်းလေး ၄ည-၅ရက် ခရီးစဉ်
Ad ref: #YGNB77
ရန်ကုန်မြို့မှည(၈)နာရီတွင် စတင်ထွက်ခွာပါမည်။ ကားပေါ်တွင် အပျင်းပြေ bingo game ကစားပါမည်။ အရင်ဦးဆုံး bingo ဖြစ်သူ ကို အမှတ်တရ လက်ဆောင် ဆု ချီးမြင့်ပါမည်။ ရန်ကုန်-မန္တလေးအမြန် လမ်းမကြီး အတိုင်းသွားပြီး(၁၁၅) မိုင်ရှိ စားသောက်ဆိုင်တွင်အဆာပြေ သုံးဆောင်ရန် မော်တော်ယာဉ် ခေတ္တရပ်နားပါမည်။ ထို့နောက် ခရီး ဆက်လက် ထွက်ခွာပါမည်။
အောင်ပန်း တွင်ချယ်ရီ စားသောက်ဆိုင်တွင် နံနက် စာသုံးဆောင်ပြီးနောက် ကုံလုံ ဆရာတော်ကြီး စံကျောင်းတော် နှင့် ပုံတူရုပ်တုတော်ကိုဖူးမျှော်ကြပြီး၊ ဆရာတော်ကြီး၏ဗိမာန် ကိုလည်း သွားရောက် ကြည်ညိုကြပါမည်။ ဆရာတော် တရား ကျင့်ခဲ့သော ကံ့ကော်ပင် အောင်မြေ တွင်လည်း ဆုတောင်းကြပါမည်။ ပြီးနောက် ပင်းတယ မြို့ရှိ ရွှေဥမင် သဘာဝလှိုဏ်ဂူရှိ ဘုရား များသို့ သွားရောက်ဖူးမျှော်ပါမည်။ နေ့လည်စာကို ပင်းတယရှိ စားသောက်ဆိုင် တွင် တရုတ်စာဖြင့် သုံးဆောင် ပြီးနောက်၊ ထို့နောက် တောင်ကြီး မြို့ သို့ဆက်လက် ထွက်ခွာကာ တောင်ကြီးမြို့ စူဠာမဏိစေတီတော်ကို ၀င်ရောက်ဖူးမျှော်ပြီး၊ ညစာကို တောင်ကြီး ရှိ စားသောက်ဆိုင်တွင်သုံးဆောင်ပါမည်။ ထို့နောက် တောင်ကြီး ရှိ ဟိုတယ် တွင်အိပ်စက်အနားယူ ပါမည်။
နံနက်စာကို ဟိုတယ်တွင် သုံးဆောင်ပြီးနောက် ဟိုပုံးမြို့ရှိ ထမ့်စန်း သဘာဝလှိုဏ်ဂူသို့ သွားရောက် လေ့လာပါမည်။ ထို့ နောက် နေ့လည်စာ ကိုတောင်ကြီးမြို့ စားသောက်ဆိုင် တွင် သုံးဆောင်ပြီး၊ ကျောက်တစ်လုံးရွာရှိ မွေတော် ကက္ကူစေတီတော် သို့သွား ရောက်ဖူးမျှော်ကြပါမည်။ ထို့နောက် တောင်ကြီးမြို့မဈေး တွင်အမှတ်တရလက်ဆောင်များဝယ်ယူ ရန် ပို့ဆောင်ပေးပြီး၊ ညစာကို တောင်ကြီး ရှိ စားသောက်ဆိုင်တွင်သုံးဆောင်ပါမည်။ ထို့နောက် တောင်ကြီး ရှိ ဟိုတယ် တွင်အိပ်စက်အနားယူ ပါမည်။
နံနက်စာကို ဟိုတယ်တွင် စောစီးစွာသုံးဆောင်ပြီး၊ ညောင်ရွှေသို့ဆက်လက် ထွက်ခွာပါမည်။ ညောင်ရွှေမှ အင်းလေးကန်သို့ခရီးဆက်ပြီး၊ နာမည်ကျော်ကြားလှသည့် ဒေသထွက် ကြာချည်၊ ပိုးချည်ထည်များယက်လုပ်သော ရက်ကန်းရုံသို့ လေ့လာ ၀ယ်ယူနိုင်ရန် ပို့ဆောင်ပေးပါမည်။ ပြီးနောက် ဖောင်တော်ဦးဘုရား၊ အလိုတော်ပေါက် ဘုရား၊ တို့ ကို ဖူးမျှော်ကြကာ၊ အင်းထဲရှိ ငါးဖယ်ချောင် ကျေးရွာမှ ရှေးဟောင်းဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းသို့ သွားရောက် လေ့လာကြပြီး၊ နေ့လည်စာကိုအင်းထဲရှိ စားသောက်ဆိုင်တွင် ရိုးရာစာများသုံးဆောင်ပြီး၊ ထို့နောက်ညောင်ရွှေသို့စက်လှေဖြင့် ခရီးဆက်ပါမည်။ ထို့ နောက် ရေပူစမ်း သို့ ဆက်လက်ထွက်ခွာ ပါမည်။ ညစာကို ကလောနား ရှိ စားသောက်ဆိုင် တွင်သုံးဆောင်ပါမည်။ (၁၁၅)မိုင် တွင်မော်တော်ယာဉ် ခေတ္တရပ်နားပေးပြီး ရန်ကုန်သို့ ခရီး ဆက်လက်ထွက်ခွာပါမည်။
ရန်ကုန်မြို့သို့ နံနက်ပိုင်းတွင် ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့စွာပြန်လည်ရောက်ရှိပါမည်။
•	ခရီးစဉ်တလျှောက် အဆင့်မြင့် မော်တော်ယာဉ်ဖြင့် စီစဉ်ထားခြင်း
•	အဆင့်မြင့် ကြယ် ၃/၄ ပွင့် ဟိုတယ်တွင် တည်းခိုခြင်း
•	နေ့လည်စာ၊ ညစာ များကို မြန်မာအစားအစာ၊ တရုတ်အစားအစာများဖြင့် စီစဉ်ပေးခြင်း
•	အတွေ့အကြုံရှိ Tour leader များမှ ခရီးစဉ် တလျှောက် အတူတကွ လိုက်ပါလာခြင်း
•	ရေသန့်နှင့် စနိုးတာဝါများ နေ့စဉ်ပေးဝေခြင်း
•	အင်းထဲရှိ စက်လှေခ အပါအ၀င်
•	စားသောက်ဆိုင် နှင့် ဟိုတယ်တွင် အပိုမှာယူ သုံးဆောင်သော ဟင်းများ၊ ရေသန့် နှင့်အအေးများ၊ အဖျော်ယမကာများ
•	လမ်းခရီးတွင် မော်တော်ယာဉ် ရပ်နား၍ စားသောက်သောအဆာပြေစာများ
•	ခရီးစဉ်တွင် မပါဝင်သော ခရီးစဉ်များ နှင့် အစားအသောက်များ
•	ဗွီဒီယိုခွန်၊ ကင်မရာခွန်များ
•	နိုင်ငံသား စိစစ်ရေးကဒ်ယူဆောင်လာပေးပါရန်
•	မိမိ မစားသော အစားအစာများကို ကြိုတင် ပြောကြားပေးပါရန်
တဦး - ၉၉၀၀၀ ကျပ်
ဆက်သွယ်ရန် - ၀၉၅၁၉၇၉၀၆
No. 78, 15 st (7th fl)
Save to favourites Report this Ad
We have staff moderating our ads7days per week, to keep quality high. Please help us in our job and let us know if there is any problem with this ad.